कुरा बारे कुरा गर्न एक केटी संग तपाईं अघि उनको पूरा
जबकि आफ्नो साक्षात्कारकर्ता हुनेछ छ को बोलेको समय मा आफ्नो कम्पनी, यो हुनेछ छाप छौं कि एक राम्रो केटा र रोचक! धेरै मानिसहरू छन्, मृत्यु डराएको छलफल गर्न को विचार संग अज्ञात द्वारा, डर को कालो प्वाल मा क्षण । हाम्रो ठूलो भलाइ, हामी तयार छन्, यो सानो पुस्तिका मदत गर्न तपाईं थाहा छ । साथै, के थाहा बारेमा कुरा गर्न एक केटी संग निर्णायक छ, तर पर्याप्त छैन: हामी पूरा लेख संग एक पहिले हामी कुनै पनि थप जान, मन राख्न पर्छ भन्ने जोगिन सबै लागत मा सञ्चालन गर्न कुराकानी को रूप मा एक केरकार. यो त्रुटि धेरै साधारण रूपमा महसुस हामीलाई धेरै छ । गर्न अन्य तरिकामा छन् नेतृत्व कुराकानी प्रश्नहरू सोधेर द्वारा छ र तपाईं प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ यी विषयहरू को कुराकानी हो, धेरै सरल रूपमा हामी गर्न त छन् यो कुरा. यो कि काम गर्न सहयोगिहरु जब तपाईं फर्कन छुट्टी देखि, एक व्यक्ति एक भेट्छन् मौका द्वारा वा मित्र भनेर थाह, तपाईं धेरै राम्रो तरिकाले प्रयोग को यस प्रकारको विषयहरू कुराकानी समयमा पहिलो बैठक । यो पक्कै नजिक तपाईं ल्याउन गर्न अन्य । तर, हेरविचार मा फँस प्राप्त गर्न यी विषयहरूमा लागि, धेरै लामो उदाहरणका लागि, के तपाईं कहिल्यै भेट एक केटी छैन जो यात्रा गर्न रुचि छ? मेरो अंश लागि, कुनै पनि भने, त्यो छ थियो कहिल्यै यात्रा गर्न मौका को विषय, ध्यान, जरूरी रूपमा लामो तपाईं कसरी थाह छ संग छलफल सत्यता छ । कुनै आवश्यकता सूची सबै देशका प्रत्येक तपाईं को यात्रा गर्न पाउन एक साधारण मा छ । तपाईं यस मामला मा एक समस्या धेरै अगाडि सार्न, मा फँस एक पनि, कुनै भावना सिर्जना गरेको छ । लक्ष्य, जब तपाईं कुरा गर्न उहाँलाई बनाउन छ, उहाँलाई वृद्धि गर्न सकारात्मक भावना र सफलतापूर्वक तपाईं गर्न सक्छन् मा हुक गर्न यो अप्ट लागि विकल्प को एक यात्रा योजना सँगै । उहाँलाई सोध्न, उदाहरणका लागि, यो छ कि झोरा वा लक्जरी होटल भने तिनीहरूले रुचि थियो एक ट्रेक पेरु वा एक सप्ताह मा माल्दिभ्स । यहाँ विचार पाउन छ विषयहरु जो तपाईं एक चासो मा साधारण मा जाने क्रम मा एक कुराकानी जहाँ दुई सहज महसुस गर्छन् । धेरै राम्रो बताउनुभयो मा आफ्नो सबै भन्दा राम्रो-बिक्री पुस्तक»बनाउन कसरी»मित्र हुन, सराहना गरेर अरूलाई, तपाईं जान्नु आवश्यक कुरा गर्न तिनीहरूलाई बारेमा तिनीहरूले के जस्तै सबैभन्दा कि, भन्न छ, आफूलाई गर्दा आफ्नो वार्ताकार छ को बोलेको समय मा आफ्नो कम्पनी, उहाँले हुनेछ छाप छ कि तपाईं छौं एक राम्रो केटा र रोचक! यो कुरा थाह पाएपछि, यहाँ केही सुझाव हो राख्नु व्यक्ति मा आसानी मा आफ्नो कम्पनी, र कुराकानी त्यो रुचि: जब तपाईं जानाजानी निर्णय दिन उहाँलाई शब्द, तपाईं तिनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न, बोल्न, र यो खुलेर के त्यो गर्न चाहन्छ । यस आदर मा, खुला-समाप्त प्रश्न, कि, भन्न छ जो प्रतिक्रिया छैन»हो»वा»कुनै»(बन्द प्रश्न), को हतियार तपाईं आवश्यक छ । यसको विपरीत बन्द, प्रश्न यो छ जहाँ तपाईं जो त्याग्न कुराकानी गर्न सही प्रश्नहरूको जवाफ तपाईं सोधेर छन्, तपाईं गर्न चाहनुहुन्छ यहाँ उहाँलाई छोड्न मुक्त क्षेत्र भनेर यो प्रकट, र गर्न फिर्ता बाउन्स गर्न सक्षम जब तपाईं चाहनुहुन्छ. प्रश्न गरेर उदाहरण मा आफ्नो नापसंद र गतिविधिहरु कि यो वहन समयमा आफ्नो मुक्त समय, वा एक विषय तपाईं रुचि हो पत्ता लगाउन यो मा (प्रकार को संगीत त्यो सुन्नुहुन्छ, उनको, के त्यो गर्छ मा एक दिन को वर्षा) समयमा यो खण्ड को कुराकानी, तपाईं सहमत गर्न छैन पनि धेरै कुरा गर्न अनुमति फैलाउनु बिना अवरोध छ । छ क्रम मा एक सुखद कुराकानी, रुचि गर्न जारी, एक दिशा मा शेखी आफ्नो जवाफ बरु निरन्तर परिवर्तन गर्न विषय छ । यस को लागि सावधान हुन कुरा गर्दा अभ्यास गरेर सक्रिय सुनेर. त्यसैले सम्म, यो छ छैन यो समय मा यो छोड एक स्वगत बिना अन्त जबकि तपाईं आराम वा रूपमा तपाईं अग्ले बेला त्यो कुरा, तपाईं सिक्न धेरै कुराहरू यो मा, कि यो छ (के त्यो रुचि छैन), आफ्नो तरिका को सोच (राय) वा यसको व्यवहार (यो कसरी व्यक्त गरिएको छ जब यो एक विषय छ त्यो बारे मा भावुक). यो कुरा सुनेर, केही कुराहरू तपाईं प्रसन्न हुनेछ, चासो तपाईं, तपाईंले सोध्न शंका बिना कहिलेकाहीं तपाईं हुनेछैन एउटै राय, वा. यस मामला मा: फेरि एक पाठ सिकेका देखि भने, तपाईं हुन चाहनुहुन्छ सराहना को अन्य, छैन तर्क गर्न दिने छैन एक राय फरक आफ्नै छ । तपाईं एक चरण मा तपाईं कहाँ निर्माण गर्न खोजिरहेको भरोसा छोडेर कुरा छ, त्यो कुनै इच्छा छ छलफल गर्न एक राय फरक आफ्नै छ । तर त्यो भन्नुहुन्छ कुरा पूर्णरूपमा झूटो वस्तु बाहेक, यो सोध्नुहुन्छ भने तपाईं मान्यकरण गर्न आफ्नो जवाफ, के तपाईं राख्न सही! हाम्रो प्राकृतिक प्रवृत्ति हामीलाई बनाउँछ के विपरीत र चाहनुहुन्छ शिक्षित अरूलाई हाम्रो ज्ञान छ । त्यसैले सम्म, हामी कहिल्यै पुग्न हाम्रो उद्देश्य मा सोधपुछ को राय हाम्रो वार्ताकार.
त्यसको विपरीत, भएको कुरा सुने लामो छ, यस बालिका को सबैभन्दा सजग हुनेछ र हेर्न हुनेछ. यो त समय दिन उहाँलाई बढी जान्न चाहने, मलाई गलत प्राप्त छैन, यो छैन किनभने एक केटी लाभ तपाईं एक प्रश्न पछि, तपाईं सुने दस मिनेट को लागि, त्यो जान्न चाहनुहुन्छ को हरेक विस्तार आफ्नो जीवन । मा भने, आफ्नो जवाफ, तपाईं गर्न सक्दैन आफ्नो ध्यान कब्जा चाँडै, तपाईं एक ठूलो मौका छ. यो गुमाउनुपर्ने छ । त्यसैले छोटो जवाफ र एक ऐतिहासिक मुख्य प्रश्न त्यो सोध्न सक्छौं. प्रश्न»के तपाईं के काम रूपमा,»तपाईं छन् भने एक इन्जिनियर टेक्नीसियन एक निर्माता को यांत्रिक भागहरु, अन्य कुराहरु, बेच्छ गर्न, रुचि जवाफ»म बनाउन»मा एक लामो, अधिक विवरण र बनाउँछ कि कम सपना । यति छोटो उपाख्यानों र कथाहरू सुन्न रमाइलो त त्यो समात्न सक्छ को एक झलक यस प्रकार को मानिस भनेर तपाईं छन्. एक प्रश्नको बारेमा आफ्नो मनोरञ्जनको उदाहरणका लागि, छलफल उत्पादन छ कि हालै गरेको मित्र संग र एक कहानी छ कि तपाईं मा आइपुग्दा त्यो दिन रूपमा, तपाईं थिए भने कुरा गर्न एक प्रेमिका को लामो मिति. जे आफ्नो आवेग, तपाईं बनाउन सक्नुहुन्छ भने यो रोचक आँखा मा अरूलाई । चाल थाहा छ कुरा सिक्न बारेमा कुरा गर्न, आफैलाई यो छ, सबै माथि, सिक्न गर्न आफैलाई बताउन यसको अनुभव बनाउन, तिनीहरूलाई रोमाञ्चक छ । जानुअघि थप, हामी पालन गर्न धेरै उदाहरणहरू को सफल अन्तरक्रिया गर्न सिक्न राम्रो प्रचलन वर्णन गरिएको छ । एक क्लासिक गल्ती को धेरै मानिसहरू छ आकर्षित गर्न चाहनुहुन्छ नजिक द्वारा निर्माण को सान्त्वना छ । म के मतलब द्वारा, सान्त्वना आशा गर्न छ को छोरी त्यो वार्ता गर्दा आफ्नो जीवनको बारेमा त्यो गर्छ तपाईं को थाह लगभग छैन । किनभने यो, सबै प्रजाहरू पनि व्यक्तिगत शुरू, को भाग रूपमा, कुराकानी हुनेछ जोगिन को शुरुवात मा बातचीत, उदाहरणका लागि, उहाँलाई सोध्न बारेमा आफ्नो सम्बन्ध आफ्नो परिवार संग, जो त्यो उनको मित्र संग छलफल गर्ने, त्यो हेर्न गए । हुनेछ नियमित रूपमा कथित एउटा घुसपैठ आफ्नो निजी जीवन भने तपाईं थाहा छैन पर्याप्त, यो एक कठिन प्रश्न छ किनभने यो हुनेछ मा भारी निर्भर छ.
आफ्नो साथी साथै जो मा बाटो छ
तपाईं सामना गर्दै छ । को मामला मा एक बैठक अनलाइन, म सामान्यतया रुचि पूरा गर्न व्यक्ति पहिले तपाईं मा पनि टाढा जान सान्त्वना क्षेत्र. वास्तवमा, केटीहरूलाई मा सामान्य छ, धेरै सम्पर्क र म चाहँदैनन् गर्न गुमाउने जोखिम को कमी को कारण चासो छ । एक पटक बैठक गरेको छ, कुरा यति हो फरक । को मामला मा एक मा-व्यक्ति बैठक, यो जान सक्नुहुन्छ छिटो । लागि रूपमा, धेरै बोल्न छैन, आफ्नो परिवार मा मिनेट पालन आफ्नो बैठक रूपमा, धेरै मानिसहरू असफल हुनेछ भन्दा एक विषय को कुराकानी पनि व्यक्तिगत नजिक हुन केटी, यो दिन्छिन् राख्न एक निश्चित दूरी, गर्न प्रतीक्षा थाहा छ, यो राम्रो छ । तपाईं चाहनुहुन्छ भने कृपया एक केटी कुरा, उनको बारे केहि मजा! तपाईं पूरा एक केटी मा मौका द्वारा सडक मा, एक पार्टी वा एक डेटिङ साइट, मा, गर्न पहिलो कुरा हो सफलतापूर्वक पारित सुखद समय को लागि, सँगै बनाउन यो सामंजस्य को एक राम्रो समय छ र तपाईं छन् भनेर मान केटी तपाईं बस भेट बारेमा भावुक छ नीति: तपाईं गर्न सक्षम हुनेछ मा संलग्न अर्थपूर्ण संग छलफल भने, यो तपाईं आनन्द को यस प्रकारको चर्चा छ । सबै लागि, कि बताए रूपमा पहिलो भाग मा के»को कुरा संग एक केटी»को शुरुवात मा, एक बातचीत छ, तपाईं पर्छ साधारण जोगिन व्यक्त आफ्नो मतभेद र तर्क एक प्रकारले विपरीत राय को आफ्नो वार्ताकार पनि धेरै छैन संग लाइन मा कस्तो विनिमय अन्तिम र छैन कम से कम, यी विषयहरू लैजानु शायद सकारात्मक भावना छ । त्यसको विपरीत छ । यस आदर मा, के तपाईं हुन चाहनुहुन्छ छैन जो व्यक्ति बनाएको छ उनको, दुःखी दुखी किनभने त्यो एसोसिएट्स, ठीकै छ, यो भावनात्मक राज्य मा आफ्नो उपस्थिति छ । यो प्रकृति को बीच फरक पुरुष दिमाग र महिला मस्तिष्क, धेरै राम्रो हाम्रो उद्देश्य: हामी, पुरुष पनि, खेती, मायालु, भयानक रूपमा हामी, हामी सबै, नगण्य छ । र लाज छ यो! सबै लागि, हामी पर्छ पहिलो हुनत सजग हुन कि लगभग सबै पुरुष छन्.
त्यसपछि, सम्झना कि महिला नै छैन लैंगिक रूपमा
यो कुरा थाह पाएपछि, के तपाईं बुझ्न किन यो विषय हुनेछैन सबै भन्दा राम्रो को प्रारम्भिक चरणमा कुराकानी? टाढा पनि धेरै मानिसहरू गर्छन् । मा गरिरहेको छ. त्यसैले, पहिलो, तपाईं के तपाईं अंतर छैन बहुमत को मान्छे । त्यसपछि तपाईं मिश्रण मा एक जन, समय को बहुमत, छैन विषय संग राम्रो । तपाईं छन्, त्यसैले, छैन अंक मा गरिरहेको त छ ।
← डेटिङ कुराकानी गर्न को लागि निःशुल्क
अनलाइन डेटिङ →